Wadooyinka Muqdisho oo lagu xiray Kaamirooyinka Qarsoon (Ogow Ujeedka laga leeyahay!) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wadooyinka Muqdisho oo lagu xiray Kaamirooyinka Qarsoon (Ogow Ujeedka laga leeyahay!)
Wadooyinka Muqdisho oo lagu xiray Kaamirooyinka Qarsoon (Ogow Ujeedka laga leeyahay!)
Muqdisho (Halqaran.com) – Wadooyinka Caasimadda Muqdisho, gaar ahaan xayndaabka ay ku sugan tahay dowladda Federalka Soomaaliya, ayaa waxaa lagu dhajiyay Kaamirooyinka Qarsoon ee wax duuba.
Waddada Maka Al-Mukarama ayaa inta badan lagu dhajiyay Kaamirooyinkaan, gaar ahaan Isgoysyada laamiga ah, waxaana hawshaan wadata Hay‘adda Nabad Suggida Soomaaliya.
Laga soo bilaa Isgoyska Banaadir illaa KMO oo ah meesha ay ku taallo Taliska NISA, waxaa lagu dhajiyay Kaamirooyin Qarsoon oo si toos ah looga arki karo muuqaalada Magaalada gudaheeda.
Muddooyinkii dambe ayaa waxaa socotay shaqo habeenkii saqda dhexe laga qabanaayay laamiyada, taasi oo ku aadan in laamiga la jeexaayay, kadibna la dhexmarinaayay fiilooyinka Kaamirooyinka.
Dadka reer Muqdisho ayaan intooda badan fahansaneyn Kaamirooyinka iyo waxtarka ay u leeyihiin suggida ammaanka Magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn, muddooyinkii dambe ammaanka Muqdisho ayaa wuxuu ahaay mid hagaagsan, islamarkaana aysan ka dhicin falal lid ku ah dhanka ammaanka, sida qaraxyo dad shacab ah wax ay ku noqdeen, kadib markii si wayn loo xakameeyay ammaanka Magaalada.
ammaanka magaalada Muqdisho
kaamirooyinka qarsoon oo lagu xiray waddooyinka Muqdisho
Nabad sugidda oo ku xirtay